घरबहाल कर नतिर्ने ७८ प्रतिशतलाई दायरामा ल्याउन् सक्लान् विद्यासुन्दरले ? | KTM Khabar
घरबहाल कर नतिर्ने ७८ प्रतिशतलाई दायरामा ल्याउन् सक्लान् विद्यासुन्दरले ?
२०७४ असार ३ गते १५:०५ मा प्रकाशित
३ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका २२ प्रतिशत घरधनीले मात्र घरबहाल कर तिर्ने गरेका छन् । कामपा, राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार घरबहाल घर लिनका लागि ठोस किसिमको कानुन नहुँदा कामपामा रहेका ७८ प्रतिशतले घर बहाल घर तिर्ने गरेका छैनन् ।
हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने भाडामा बस्ने र घरपटिबीच सामान्य मौखिक समझदारी भएर भाडा लिने, दिने र बढाइने गरिएको छ । “कुनै कानुनी आधारमा रहेर यस किसिमको काम हुने गरेको छैन”, प्रमुख काफ्लेले भने ।
नियमको अभाव र जनशक्तिको कमीजस्ता कारण देखाउने कामपाले कर सङ्कलन लागि यति ठूलो सम्भावना बोकेको शीर्षकमा पनि अपेक्षानुरुप कर सङ्कलन गर्न सकेको छैन । पूर्ण रुपमा घर बहाल करसम्बन्धी ऐन नहुँदा कर नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार कामपालाई छैन ।
नवनिर्वाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले घरबहाल कर नतिर्ने ७८ प्रतिशतलाई दायरामा कसरील्याउलान् भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ ।